Ogaden News Agency (ONA) – Dawlada Soomaaliya oo Qorshaynaysa Dagaal Ka Dhan Ah Al-Shabaab.
Dawlada Soomaaliya oo Qorshaynaysa Dagaal Ka Dhan Ah Al-Shabaab.
Madaxda Maamul-goboleedyada iyo dowladda Federalka Soomaaliya ayaa ku heshiiyeen shir at maaml ka hor ku yeesheen magaalada Muqdisho qaab dhismeedka iyo isku dhafka ciidan qaran oo ay Somalia yeelato, lana hirgeliyo muddo lix bilood ah.
Warkan ayaa sheegaya in heshiiskan uu ku soo aaday iyadoo dowlada Soomaaliya ay diyaar garow xoog leh ugu jirto dagaal uu madaxweynuhu sheegay in Al-Shabab looga xoreynayo Somalia. Madaxwayne Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in dagaal culus at ku qaadi doonaan kooxda al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya.
Shirkii Golaha Wasiirada oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa Isna lagu sheegay in dhawaan uu bilaaban doono howlgalkaasi ciidan ee la qorshaynayo, waxaana la balaadhiyay Golaha Amniga Qaranka ee dalka Soomaaliya oo lagu wato in uu amaanka dalka gacanta ku dhigi doono.